Hurumende Inorasa Nyaya yeChibage Yaipomerwa VaBennett
Hofisi yemuchuchisi mukuru wenyika yazivisa kuti haisi kuenderera mberi nenyaya yakaunzwa nemapurisa yekupomera mubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, mhosva yekuchengeta chibage zvisiri pamutemo.
Rimwe gweta guru muhofisi yemuchuchisi mukuru, VaChris Mutangadura, vanoti vaona zvakakodzera kuti vasaendese nyaya iyi kumatare sezvo yakanonoka kuuyisa kumahofisi aAttorney General, kuitira kuti iendeswe kumatare edzimhosva.
Mashoko aVaMutangadura aya anotevera mashoko emukuru wavo, Director of Prosecutions, Amai Florence Ziyambi, avo vakaudza bepanhau reThe Independent neChina, kuti hofisi yavo yakanga isisaendereri mberi nenyaya iyi.
Mapurisa anoti VaBennett vakawanikwa vaine chibage chakawanda muna 2001 izvo zvisingabvumidzwi nemutemo. VaMutangadura vatiwo mapurisa haakwanisi kuenderera mberi zvakare nenyaya iyi sezvo hofisi yavo yaramba kuitambira.
Ivo VaBennett vaudzawo Studio7 kuti vanga vasati vanzwa nezvedanho iri, vakati kana chiri chokwadi, vanotambira danho iri nemufaro mukuru.
VaBennett vakamirira kupihwa mutongo pamhosva yavari kupomerwa yekuda kuuraya VaMugabe, uye kokonzera zvehugandanga. Asi VaBennett vari kuramba mhosva yavari kupomerwa.